ချစ်သောကဗျာ-၂ | PoemsCorner
ကဗျာဆရာသည်သူရောက်ရှိနေသော ခေတ်၏ ရိုက်ခတ်မှုကို ခံရမည်မှာအသေအချာပင်ဖြစ်သည်။ ထို.အတူ ထိုရိုက်ခတ်ချက်ကို သူ၏ တုံ.ပြန်မှုသည် ကဗျာတွင်ပါလာမည်မှာအမှန်ပင်။
သို.သော်လည်း မည်မျှအထိပါဝင်သည်၊မည်သို. အပြုသဘော အဖျက်သဘောဖြင့် တုံ.ပြန်သည် ဆိုသည်မှာ ကဗျာဆရာ၏ ပုဂ္ဂလိက ကိစ္စသာဖြစ်သည်။ကဗျာဆရာ၏ စိတ်အတွင်းဝယ်ရှိသော ရှုထောင့်သာဖြစ်သည်။ ဌင်းတုံ.ပြန်မှုသည် ကဗျာအတွင်းဝယ် ၀င်လာသော အခါ ပုဂ္ဂလိက ကိစ္စ ဟုတ်မဟုတ်သည် စဉ်းစားရန်ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။
ကဗျာ အတွင်းရှိ အနှစ်အသားသည် ကဗျာဖတ်သူကို ရိုက်ခတ်မှုရှိနိုင်မရှိနိုင် စဉ်းစားတော်မူကြစေလိုပါသည်။
ဖိုးဝဇီရ၏ ရေထဲကို လက်ချင်းတွဲ ခုန်ချသွားသောချစ်သူနှစ်ဦးအကြောင်း ဖွဲ.ဖွဲ.နွဲ.နွဲ. သတင်းကြောင့် ရေထဲခုန်ချရန်ကြံစည်သူများ ပေါ်ပေါက်လာသည်ဟုကြားဘူးပါသည်။သို.သော် ဖတ်သူတိုင်းခုန်ချမည်လို.တော့မပြောနိုင်ပါ။ စိတ်နုသူများအတွက်တွန်းအားများဖြစ်လေမည်လား၊ စဉ်းစားမိပါသည်။
အစွန်းရောက်ပြောရန်မကြံရွယ်ပါ။ အကျိုးတစ်ခုရဖို. အကြောင်းတရားသည်များစွာရှိပါလိမ့်မည်။ သို.သော် နောက်ဆုံးကောက်ရိုးတစ်မျှင်ကြောင့် ကုလားအုတ်ခါးကျိုးရသောပုံပြင်ကိုလည်း မမေ့စေချင်ပါ။
ကဗျာဆရာသည် ကွန်မြူနစ်ဖြစ်ချင်ဖြစ်မည်။ လူသားဝါဒထားသူဖြစ်ချင်ဖြစ်မည်။အိတ်ဇစ်ဖြစ်ချင်ဖြစ်မည်။ သူတို.၏ အတွေးများအကြံများသည် ထို သဘောတရားများ၏ ရိုက်ခတ်ချက်ပါလာပါမည်။ ထပ်ပြောပါမည်။ တားရန်မကြံပါ။ အလေးအနက်ထပ်ပြောပါမည်။ တား၍ မရစကောင်း ၊တားရန် မသင့်ပါ။
ပြောချင်သည်က ထို သဘောထားများ၏ နောက်ရှိကဗျာဆရာ၏ ကဗျာဇောစေတနာကိုပါ။
ဂေါ်ကီ၏ အမေသည်လည်းကောင်း၊မြသန်းတင့်၏ ဓားတောင်သည်လည်းကောင်း သဘောတရားတစ်ခု၏ ရိုက်ချက်ပါနေပါသည်။ သို.သော် ဖတ်၍ မရိုးနိုင်သေးပါ။ ထိုစနစ်များ အားပျော့လျော့ရည်းသွားသည်.တိုင် ထိုဝတ္တုများသမိုင်းတွင်နေပါမည်။ (ဓားတောင်ကို ဖတ်ရသည်မှာ ရှစ်တန်းနှစ်ဖြစ်ပါသည်။ စနစ်အကြောင်း မသိပဲကြိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။)
သံချောင်းကို အလုပ်သမားလူတန်းစားအနေဖြင့် ကြိုက်ခြင်းမဟုတ်ပဲ အားလျော့ အရှုံးပေးခြင်းမရှိသော လူသားတစ်ယောက်အနေဖြင့် ကြိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အမေကို အဖိနှိပ်ခံ လူတန်းစားအနေဖြင့်မြင်ခြင်း မဟုတ်ပဲ သားကို ချစ်သော အမေအဖြစ်ကြိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
စာရေးသူ၏ သဘောတရားထက် လူသားတို.၏ မြင့်မြတ် အနစ်နာခံသော ကောင်းကွက်များကို ထည့်သွင်းဌာပနာထားသော ရေးသူ၏ စေတနာပါ။
ဝေဖန်ရေးဆရာကြီးတစ်ဦး၏ စကားကို ညွှန်းပါမည်။
“ထာဝရရှင်သန်မှု နှင့်ပြည့်စုံသော၊မြင့်မြတ်သာ တစုံတရာ (ကဗျာ) ကို သိမ်နှုတ်ညံ့ဖျင်းသော စိတ်ရှိသူ သာမန်လူသားတစ်ဦး ဖွဲ.ဆိုနိုင်သည် ဆိုသည်မှာ မဖြစ်စကောင်းပါ”
သူသည် အဘယ်သို.သောကဗျာ မျိုးကို ဆိုလိုနေပါသနည်း။ဆက်၍ ရှင်းရပါမည်။လိုသောစကားကိုလည်း အထပ်ထပ်ပြောပါမည်။ ကြိုက်ရင်ယူပါ။ မကြိုက်ရင်ပယ်ပါ။
In: ဆောင်းပါး Posted By: မော်နီ Date: Apr 28, 2011
ချစ်သောကဗျာ -၈ (နိဂုံး)